UnlockRoot, ingcambu kunye unroot ngonqakrazo olunye | I-Androidsis
UFrancisco Ruiz | | Ingcambu Android, Izixhobo ze-Android, Tutorials
UnlockRoot sisixhobo simahla se Windows, esinokuthi ingcambu okanye unroot inani elifanelekileyo lezixhobo ezihambelanayo, ukuba ufuna ukwazi ukuba isixhobo sakho siyahambelana nale ndlela, kuya kufuneka ume apha kwaye ujonge imodeli ye-Smartphone kunye nohlobo lwe-Android.
Isicelo sisebenza kuphela kwiWindows kwaye njengoko benditshilo emzuzwini odlulileyo, kunjalo isebenza kwiitheminali ezininzi, apho kufuneka kugxininiswe oku kulandelayo:
1 UnlockRoot Iitheminali ezihambelanayo
2 Uyiqhuba njani inkqubo
UnlockRoot Iitheminali ezihambelanayo
Nalu uluhlu lwe ezinye izixhobo ezihambelanayo, khumbula ukuba kukho iimodeli ezimbalwa zokuqaqambisa, kuba uluhlu lweemodeli ezihambelanayo lubanzi kakhulu kwaye aluniki lukhulu kwisithuba kodwa njengoko ubona, kufanelekile kakhulu ithebhulethi yengcambu njenge mobile:
Isinyithi seAcer Liquid
I-Acer A100, A200, A500
nokuVavanyelwa (iyahambelana neemodeli ezingaphezu kwama-50)
Huawei (uninzi lweemodeli)
lenovo (uninzi lweemodeli)
Motorola (uninzi lweemodeli)
Samsung (uninzi lweemodeli)
Sony Ericsson (uninzi lweemodeli)
ZTE (uninzi lweemodeli)
Njengoko ndikuxelela uluhlu lwe Iimpawu ezihambelanayo kunye neemodeli Kunye nohlobo lwe-Android olusebenzela nganye yazo Ibanzi kakhulu, kwaye kufuneka uye kwiwebhusayithi yabo ukukhangela iimodeli ezifanelekileyo.
Ezinye izixhobo ezihambelanayo
Uyiqhuba njani inkqubo
Into yokuqala yazo zonke iya kuba kukukhuphela le nkqubo kwikhonkco elilandelayo, emva kokuba yenziwe iya kuthi idibanise ifowuni okanye isixhobo esihambelanayo siqiniseke ukuba Ukulungiswa kwe-usb kuvunyelwe kwimenyu yesethingi yesixhobo.
Kuya kufuneka ukuba ube abaqhubi besixhobo sethu esifakiweyo ngokuchanekileyo kwikhompyuter yethu, oku nganye ngokwemodeli yayo, umzekelo, ukufaka abaqhubi be Samsung Kuya kufuneka siyifakile Kies Yinkqubo engagqibekanga yophawu ukulawula nokuhlaziya izixhobo zayo, ngezixhobo ze ZTE Asizukukhuphela nantoni na, kuba xa uqhagamshela isixhobo kwikhompyuter nge-USB, siya kuba nethuba lokuvula ifolda okanye ukusebenzisa setup.exe apho kulapho abaqhubi besixhobo bakhona.
Nje ukuba inkqubo ivule kwaye i-terminal ehambelana nayo iqhagamshelwe ukulungiswa kwe-usb kuvunyelwe, inkqubo ingcambu okanye unroot Kuphela kukucinezela iqhosha elinye elibekwe ngasekhohlo kwenkqubo yewindows.
Nje ukuba ukhetho lwe Ingcambu o unroot Siza kuyivumela inkqubo ukuba yenze umsebenzi wayo ngaphandle kokuyiphazamisa, ide ibuyisele kuthi yonke into ihambe Kulungile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ingcambu Android » UnlockRoot, isixhobo sokuncothula inani elifanelekileyo lezixhobo
Ngaba iyakusebenzela i-Lg Optimus L7?
Nge-11/09/2012 ngo-20: 15, «Disqus» wabhala:
UCarlos Cornejo sitsho
Mholo!! Ndifuna ukukhulula i-motorola xt320 defy mini nangayiphi na indlela yokwenza?
Phendula uCarlos Cornejo
Ayisebenzi, ndineGalaxy Nexus ebonakala kuluhlu kwaye akukho nto….
Faka abaqhubi bezixhobo.
Nangona uneGalaxy Nexus kukho isixhobo sokwenza yonke into nge-11/09/2012 21:19, "uDisqus" ubhale:
oriol sanchez jonga sitsho
Phendula u-oriol sanchez miro
Ngoku andilikhumbuli igama ngokukhawuleza. Ndenza iposti ngalo. Ngo-11/09/2012 23: 16, "Disqus" wabhala:
I-Gnex Toolkit v7.8, ndibhale nje imbiza malunga nayo, kwaye ndongeze amakhonkco okhuphelo lwayo.
Ndine-coolpad 5860E ayikho kuluhlu nayiphi na enye indlela, ukuze ndiyincothule?
Molo, akunakwenzeka ukuba ndikhuphele iSuperoneclicl ukucothula iselfowuni yam yaseTshayina ngaphandle kohlobo lwe mod. I-A600-i-antivirus yam ibhaqa iiTrojans -Ndinyanzele ukuba ndiyikhuphele ngaphandle kwentshukumo-ayiyithobi nayo- ucebisa enye inkqubo. ukuyisiphula neengcambu? nabaqhubi (endixelela ukuba kufuneka ndibekile) ndibafumana phi? - gcas -
Khangela i-UnlockRoot, Apha kwi-Androidsis unenqaku elichazayo kunye nekhonkco lokukhuphela.
Hayi, iya kuba yeyokusebenzela i-sony Xperia arc S Lt18i
Yizame kwaye uya kushiya amathandabuzo
Nge-05/02/2013 ngo-19: 33, «Disqus» wabhala:
Ndifumana njani kwaye ngabaphi abaqhubi abachanekileyo?
Mzalwana, ndifumana oku: Yehlulekile ukufumana ingcambu yegobolondo, nceda sebenzisa iinkonzo zengcambu yethu yobungcali!
Phendula ku-lngel Vasquez
Nge-08/03/2013 ngo-22: 21, «Disqus» wabhala:
Molo! Ndize apha ndikhangela indlela yokucothula i-LG GT540g yam kwaye ndizame izinto ezininzi kodwa akukho nanye eye yandisebenzela, i-unlockroot ayisebenzi kum kwaye bendikhangela indlela yokuyikhupha kangangexesha elithile kuba ndifuna ukufaka Ukudlala kuGoogle okanye kwintengiso kuba xa uzama ukuvula imakethi indinika impazamo kwaye uyivale… ndine-Android 2.1 uhlaziyo 1 nceda ndincede….
Phendula uCarlos Sanchez
Ndidinga ukukhupha i-huawei y 200
Ndine-SONY Ericcson lt18i kwaye ndifumana le mpazamo, Yehlulekile ukufumana ingcambu yegobolondo, nceda usinike iinkonzo zeengcambu zethu zobungcali, ngoba?
Ungayingcambu nge-motorola defy mini?
Jonga uluhlu lweetheminali ezihambelanayo kwiwebhusayithi yesicelo sakho. Nge-21/05/2013 21:57, «Disqus» wabhala:
Molo NDIFUNA UKUVULA UMBONO WE-HUAWEI U-8850, IBASEBAND VERSION: PR2,… INKQUBO IYAQHUBA KUM KODWA AYIGQIBIYO IYEKE ISILELE UMYALEZO OTHETHA UKUNXIBELELANA NENGCALI YAKHO YOBUNGCALI… NDICELA NDINCEDE NDIBALELE UMNXEBA NGENXA YANYE .. ENKOSI